Заб 130 CARSA - Nnwom 130 NA-TWI | Biblica América Latina
Заб 130 CARSA - Nnwom 130 NA-TWI
1Вечный, не возгордилось моё сердце,
3 Да уповает Исраил на Вечного
CARSA : Заб 130
1Awurade, mifi m’aba a abu nyinaa mu refrɛ wo. 2 Tie me sufrɛ, O Awurade; tie me frɛ, na boa me!
3 Sɛ wubu yɛn bɔne ho nkontaa a, anka hena na obeguan atemmu? 4 Nanso wode kyɛ yɛn nti na ɛma yetumi gyina w’abufuw ano no. 5 Meretwɛn ahopere mu, apɛ Awurade mmoa, na mede me ho to n’asɛm so. 6 Metwɛn Awurade ahopere so sen ɔwɛmfo a ɔretwɛn adekyee. 7 Israel, fa wo ho to Awurade so efisɛ, ne dɔ wɔ hɔ daa, na bere biara wasiesie ne ho sɛ ɔbɛboa. 8 Obegye ne nkurɔfo, Israelfo, afi bɔne nyinaa mu.
NA-TWI : Nnwom 130